Huawei Watch 3 sy FreeBuds 4, miloka amin'ny akanjo avo lenta | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 02/06/2021 19:25 | General, About us
Ny orinasa aziatika dia nanao famelabelaran-kevitra iraisam-pirenena izay namelany anay hijery topy ny vaovao izay ho tonga amin'ny telovolana manaraka. Tsy ho ela dia hanana ny fahafaha-mitondra anao izahay handinihana lalina ireo fitaovana rehetra ireo, mandritra izany fotoana izany dia holazainay aminao ny momba ny vaovaon'izy ireo.
Nivadika ambony ambany ny Huawei miaraka amin'ny Huawei Watch 3 sy Watch 3 Pro vaovao miaraka amin'ny feo tsara indrindra miaraka am-peo am-peo TWS FreeBuds 4. Ho hitantsika izay fanatsarana rehetra ampanantenain'i Huawei miaraka amin'ireo fitaovana vaovaony ary raha toa ka tena mendrika ny miloka amin'ireo vaovao rehetra ireo.
1 Huawei Watch 3 sy Watch 3 Pro
Huawei Watch 3 sy Watch 3 Pro
Manomboka amin'ny famantaranandro vaovao avy amin'ny orinasa aziatika isika, mandray endrika boribory miaraka amina fanamboarana somary voadio kokoa. Hanohy hiaraka amin'ny bokotra mekanika izy io, na dia nanisy "satroboninahitra" boribory aza izy ireo tamin'ity indray mitoraka ity izay ahafahantsika mifanerasera HarmonyOS 2 toy ny Rafitra miasa. Samy hametaka takelaka izy roa 1,43 ″ AMOLED miaraka amin'ny 1000 nits, raha ny kinova "Pro" kosa dia hanana kristaly safira.
Hi6262 no ho mpikirakira izay hikarakara ny asa miaraka amin'ny RAM 2 GB sy fitehirizana 16 GB. Hanana fifandraisana 4G isika amin'ny alàlan'ny eSIM, monitor tahan'ny fo, sensor oxygen oxygen, WiFi, Bluetooth 5.2 ary mazava ho azy NFC. Io dia hahafahantsika mandinika ireo masontsivana marobe, ary koa hanaraka ny fiofananay amin'ny alàlan'ny GPS, izay ho fantsona roa amin'ny tranga misy ny Pro. Mbola tsy manana daty ofisialy ofisialy na vidiny tombanana izahay.
Ny taranaka fahefatra an'ny headphone malaza indrindra an'ny marika dia tonga miaraka amina loko mahaliana sy tranga famahana famantaran-tena. Huawei dia nanamboatra azy ireo ho maivana kokoa, maivana ary amin'ny teôria matanjaka kokoa. Hanolotra fifandraisana Bluetooth 5.2 sy bateria 30 mAh izy ireo isaky ny earbud miaraka amin'ny 410 mAh amin'ny tranga famenoana.
Amin'izany no hananantsika Fahaleovan-tena 4 ora amin'ny sofina ary ora 20 hafa ao amin'ity tranga ity. Azontsika atao ny mampifandray azy ireo amin'ny fitaovana roa miaraka amin'izay koa noho ny fifandraisana roa miaraka amin'ny latency 90 ms fotsiny. Manana ianao izao Ny fanafoanana ny tabataba mavitrika dia mahery kokoa hatramin'ny 25 dB na dia tsy manana fitaovana mitokana aza. Izy io koa dia mandova ny fiasan'ny FreeBuds 3 sy ny fifandraisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Huawei Watch 3 sy FreeBuds 4, miloka amin'ny faran'ny akanjo avo lenta